တမ်းပလိတ် ဆွေးနွေးချက်:IPA Vowels - ဝီကီပီးဒီးယား
တမ်းပလိတ် ဆွေးနွေးချက်:IPA Vowels
အဓိက ဒီ table လုပ်တာ၊ ဒီထဲက ဆိုင်ရာ တမ်းပလိတ်များအားလုံးကို ဟိုဘက်က ယူထည့်ရင် နေရာမှန် ရောက်နိုင်သလားဗျ? ကို Ninjastriker, ကို Dhawell.hlugalay တို့ နဲနဲကြည့်ပေးပါဦး။ Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၂၀:၃၄၊ ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)
ဒီတမ်းပလိတ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ "module:IPA symbol/data" နဲ့ "module:IPA symbol" တို့ကို ဆွဲထည့်ထားပြီးပါပြီ။ "redlink"တွေကိုတော့ နောက်မှပဲ module တွေထဲကနေ ဖြည်းဖြည်းပြင်သွားလိုက်ပါမယ်။ Dhawell.hlugalay (ဆွေးနွေး) ၀၀:၅၅၊ ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ဒီတမ်းပလိတ်ရော၊ အခြား IPA တမ်းပလိတ်တွေ ကူညီပေးတဲ့ Bro သုံးဦးစလုံးကို ကျေးဇူးပါ။ ရေရှည်ရေးရမှာမို့ အခြားဆောင်းပါးရေးလိုက် ဒီဘက်ကဟာရေးလိုက်တော့ဖြစ်ပါမယ်။ အကြောင်းရာတစ်မျိုးထဲရေးရင် ပျင်းလို့! Thanks for your great help & really, fully appreciate it! Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၀၉:၄၀၊ ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)
@Ninjastrikers:, အကို အားတဲ့အခါ သရဇယားထဲက symbol တွေကို enwiki နဲ့ ချိတ်ထားတာလေး ပြန်ဖြုတ်ပေးဖို့ အကူညီတောင်းတာပါ။ မော်ဂျူး:IPA symbol ဒီမှာပြင်ရသလား မသိဘူး၊ ဆောင်းပါး များလာတော့ ဘယ်ဟာရေးပြီးမှန်း ဇယားကြည့်မရလို့၊ အားမှပါ။ Thx in adv! Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၁၇:၀၅၊ ၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ (UTC)
ပြင်လိုက်ပါပြီ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၇:၂၅၊ ၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တမ်းပလိတ်_ဆွေးနွေးချက်:IPA_Vowels&oldid=667322" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၁၇:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။